Ngo-1966 yena kwakhululwa umphenyi Soviet lokuqala - ". Qaphela Car" Abadlali abathintekayo ifilimu ngubani, moviegoers ujwayelene kuwo wonke umuntu. Nakuba indaba umphenyi kunzima ukubiza, ngoba izibukeli ababuka izigigaba ezenzeka esikrinini nge emomotheka, bathanda njengoba villain main, futhi umeleli yomthetho umfaniswano wamaphoyisa. Isithombe sigcinwa nge-afuthwe ngesibulali amandla omuhle kusukela ekuqaleni kuze kube credits sekupheleni. Ngo indaba umphenyi usengakwazi ukubona namahloni futhi enesizotha serial imishini imoto isela, okungasekelwe ehlukanisiwe nomqulu omncane kaShakespeare, nanolwazi, umphenyi okunzima, ukudlala yemidlalo kazwelonke? Zonke amafilimu Eldar Ryazanov babe zabuna cinema.
Incazelo emfushane ifilimu "Xwayani Car"
Edolobheni izakhamuzi elichumayo lamaSoviet laqala zinyamalale izimoto, isela babo bomsebenzi entshontsha. Ngo ezivamile umphenyi izindaba, umqondisi akazange akwembule ngaleso sikhathi ukuba izethameli imbangela eyinhloko, kodwa kule movie uma kuba sobala ukuthi isela kwakunguJesu njenge-ejenti evamile umshwalense - Yuri Detochkin (I. Smoktunovskij). Umphenyi - boletus Maxim (O. Efremov) - kumele ngokushesha udalule lokhu uchungechunge ubugebengu futhi uthole isela. Abadlali of the ifilimu "Xwayani Car", okuyinto wadlala umphenyi futhi owonile, umqondisi ezikhethiwe ngendlela engcono kakhulu.
Detochkin - kungasondeli sela abavamile, zonke isukela yokuthengisa imishini, ithumela emakhaya yezingane. Ngakho afuna buyisa ahluleli, Yuri entshontsha kwalabo kuphela imali esebenzisa yokungathembeki. It kuvela uhlobo uhlobo Robin Gud ne yomshuwalense iphothifoliyo agent.
Ukudalelwa kuletha umphenyi futhi owonile ngasikhathi sinye yaseshashalazini amateur, bobabili kakhulu othanda art, uthando kaShakespeare futhi afune ubulungisa, munye kuphela usebenza izindlela zalo siqu. Ngokushesha, zithuka futhi, uma ngikhuluma iqiniso, iqiniso-umphenyi kufanele ukhethe phakathi zobungane umthetho.
"Xwayani Car": nabalingisi izindima
Ukhonkolo we ahlekisayo Soviet angase ngokufanele ngokuthi inkanyezi. Akukho muntu ongakawuboni ifilimu "Xwayani Car." Abadlali, ababedlala njengoba izindima ezinkulu nezincane, futhi, ajwayelekile kubo bonke:
Innocent Smoktunovski - Yuri Detochkin;
Oleg Efremov - boletus Maxim;
Olga Aroseva - Luba (umakoti Detochkin);
Thanda Dobrzhanskaya - Detochkin umama;
Andrei Mironov - Dima Semitsvetov;
Anatoly Papanov - Test Semitsvetova;
Tatyana Gavrilova - unkosikazi Semitsvetova;
Evgeny Evstigneev - amateur umqondisi yaseshashalazini.
Innocent Smoktunovski futhi Oleg Yefremov
Ngakwazi ukubamba fancy okungaphezu kokukodwa isizukulwane izibukeli ifilimu "Xwayani Car", izindima eyinhloko nabalingisi baye babhekana kahle umsebenzi wabo. Kuvele Eqinisweni ezithakazelisayo wukuthi Smoktunovski, nakwa-Efrayimi awazange kubhekwe phambi uhlelo abadlali amahlaya, ngakho izinhlamvu babo bubheke usinga kanye sibi, futhi ifilimu kunalokho ubizwe tragicomedy.
indima Okokuqala Detochkin okuhloswe Yuriyu Nikulinu, kodwa izimo zase kangangokuthi ayehambile kwezamahlaya izinyanga eziyisithupha e-Afrika. Ngemva kokuzama Oleg Efremov, le nabenzi bamabhayisikobho bekubona isela abathobekile nomseshi okunzima, ngakho Efremov Maxim Podberezovikova kudlalwa, futhi indima waya Yuriya Detochkina Innokentiyu Smoktunovskomu.
Ngaleso sikhathi, uma kuziwa endabeni ngokudubula ifilimu, Smoktunovski selapha ukugula okungathí sina kakhulu - amehlo sofuba, kodwa indima uyajabula ngakho naye ukuthi imisiwe ukwelashwa, ukudlala Detochkin. Ikakhulukazi ngoba lokhu kwadingeka afunde ukushayela futhi sidlule ngakwesokudla.
"Xwayani Car": Umlingisi
Phakathi umlingisi Ngithanda ukusho zonke intandokazi yakho Andrei Mironov futhi Anatoly Papanova. Lezi osomahlaya nge amahlaya abo futhi Improvisation njalo in the ifremu uma kulandelwe yonke imigudu esihle onamileyo kwemizwelo nezisebenzi, okuyinto Yiqiniso, wadlulela izilaleli. Abagxeki baziswa indima Dima Semitsvetova kudlalwa Mironov, njengoba omunye umlingisi engcono ohlwini. A catch ibinzana uSemyon Vasilyevich, a Colonel umhlalaphansi Ubabezala ka Dima, kudlalwa Papanov namanje abantu bahlale bemazi.
Olga Aroseva ukusungula indima Lyubochka, umakoti Detochkin kwadingeka afunde ngempela ukushayela ibhasi Sibona bese ngisho uthole ilayisense yokushayela. Okunjalo kwaba nesidingo Eldara Ryazanova. Nale ndlela ngokudalwa ifilimu futhi umsebenzi omuhle kakhulu nabalingisi ebhayisikobho Ungeze isithombe enjalo emangalisayo, lapho ungakwazi ukubuka ngokuphindaphindiwe.
"X2": nabalingisi, ukukhiqizwa, a baxgeki
Marvel Comics ( "Marvel"), Ukuba: isithombe, ukuphakama, umthamo
Ukusiza ngomsebenzi visa Schengen: ubuqili design